केसीपक्ष र सरकारबीच चौथो वार्ता | Sagarmatha Chautari
केसीपक्ष र सरकारबीच चौथो वार्ता
अनसनरत डा. गाविन्द केसीका मागहरुको विषयमा मंगलबार सिंहदरवारमा चौथो पटक वार्ता भएको छ । विगत २५ पनदेखी अनसनरत डा. केसी र सरकार विचको यो वार्ता चौथो पटक भएको हो । करिब पाँच दिन लामो तनावपछि केसी पक्ष सरकारको पुरानै टोलीसँग वार्ता गर्न तयार भएको हो । यसअघि केसीले कर्मचारीसँग वार्ता गर्दै नगर्ने अडान लिएका थिए ।
आज साँझ साढे ५ बजे दुवै पक्षबी चौथो चरणको वार्ता शिक्षा मन्त्रालयमा हुन लागेको केसी पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य डा। अभिषेक सिंहले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल नेतृत्वको पुरानै वार्ता टोली नयाँ म्यान्डेटसहित वार्तामा बस्न लागेको हो ।
डा। केसीको तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजन डा. जीवन क्षेत्रीले गर्दैछन् । स्रोतका अनुसार नेकपाका नेता सुबास नेम्वाङसँगको अनौपचारिक वार्तापछि औपचारिक वार्ताको वातावरण बनेको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको उपस्थितमा प्रधानमन्त्री निवास बालुटावारमा केसीको अनशनबारे छलफल भएको थियो । त्यस छलफलले केसीको मागलाई निकास दिन सकारात्मक पहल थाल्ने निचोड निकालेको थियो ।